Indlela Yokutshintsha Ngomntu Umhla nexesha kwi-Mac
Macs Iingcebiso kunye namacebo
Ukutshintsha ngokuchanekileyo usuku kunye nexesha kwi-Mac
Ukutshintsha umhla kunye nexesha
Cofa kwixesha lokuqala. Catherine Roseberry
Nangona ngezinye izihlandlo ungathanda ukutshintsha imimandla yexesha njengoko uhamba, akufuneki ukuba uhlengahlengise umhla kunye nexesha kwi-laptop yakho ye-Mac xa ukhetha ukhetho lokusetha usuku kunye nexesha ngokuzenzekelayo. Nangona kunjalo, ukuba loo mini ifika, unokwenza utshintsho kwiSkrini nexesha lokukhethwa kwenkqutyana, ovulelayo ngokuchofoza kwisibonisi sesikhathi kwikhoneni eliphezulu le-menu ye-Mac yakho.
Vula usuku kunye nezikhethi zexesha lesikrini
Cofa ngomhla kunye nexesha lokuvula ifowuni entsha. Catherine Roseberry
Kwimenyu yokuhla kwexesha lesalathisi, qhafaza ngomhla ovulekileyo kunye neenketho zokufumana ixesha ukuya kwixesha lokukhethwa kwesikrini.
Qaphela: Unokukrofa iqhosha lokuthandayo kwi -dock uze ukhethe Usuku nexesha lokuvula ikhefu yokukhethwa kwexesha kunye nexesha.
Ukutshintsha ngokuchanekileyo ixesha kwi-Mac. Catherine Roseberry
Ukuba iskrini somhla nexesha sivalelwe, nqakraza kwi- icon yecinki kwikona elisekhohlo ukuze uyivule uze uvumele utshintsho.
Ungayiqwalasela ibhokisi elandelayo ekusekeni umhla kunye nexesha ngokuzenzekelayo . Ukuchofoza kwi- clock face uze udibanise izandla ukuze utshintshe ixesha, okanye sebenzisa iintolo ezisezantsi nezantsi phantsi kwintsimi yexesha ngasentla kwibuso lewashi yedijithali ukulungisa ixesha. Shintsha usuku ngokuchofoza iindlovu ezisezantsi nezantsi ezantsi kwintsimi yomhla ngaphezu kwekhalenda.
Qaphela: Ukuba ufuna nje ukutshintsha imimandla yexesha, nqakraza i- Time Zone ithebhu kwaye ukhethe indawo yexesha kwimephu.
Gcina iinguqu zakho
Cofa u Gcina ukuze ulondoloze utshintsho. Catherine Roseberry
Ukuchofoza kwi- Gcina kuqinisekisa ukuba ixesha elitsha olikhethileyo ligcinwe uze ufune ukutshintsha ixesha kwakhona.
Khusela ezinye iinguqulelo
Cofa ukhiye ukukhusela utshintsho. Catherine Roseberry
Isinyathelo sokugqibela omele usibambe ukuchofoza uphawu lwelokhi ukuze kungabikho bani ongenza olunye utshintsho, kwaye utshintsho olwenzile luya kuhlala lusebenza kuze kube yilapho ufuna ukutshintsha usuku okanye ixesha kwakhona.
Isikhokelo sokuSusa iMeyili ngaphandle kokuvula kwiMetro Mail
Ukusebenzisa i-Bar ye-Hidden Finder Path Bar
Indlela yokutshintsha i-Sound Mail entsha kwi-Mac OS X Mail
Indlela yokuthumela ii-Attachments ezinkulu zeFayile (Kufike ku-5 GB) kwi-OS X Mail
Indlela yokwenza iMac OS X Mail Ulibale iphasiwedi
Indlela yokukhusela iMenyu yokuPhucula i-Safari
Indlela yokubuyisela kwakhona iiWindows kwi-App App Store
Indlela yokwenza i-OS X kunye ne-MacOS Mail Yithumelele iziQiniso eziQheleleyo
Phindela phezulu okanye Hambisa Iinkcukacha Zakho zoNxibelelwano okanye iNcwadi yeDilesi yeeNdawo
Indlela Yokuphakamisa Isixhobo okanye Ukuphuculwa kweGmail
Kuthetha ntoni i-FQDN?
I-Mail.com kunye ne-GMX Mail - IiNkonzo ze-imeyile zamahhala
Isixhobo soCoca kwi-Photoshop CS2
Iprojekthi yevidiyo yeOptoma HD20 DLP - Igalari yezithombe
Konke ngeeRadio Scanners
Ukongeza ngokusemthethweni umculo we-copyright kwividiyo yakho ye-YouTube
Ukuhlaziywa kwe-Backup Online
12 I-Apple TV Iingcebiso 4 Mhlawumbi awuzange Usebenzise
Yintoni iFayile yeBSA?
I-iPhone yam ayiyi kukhawuleza! Ndenze ntoni?
Ukusebenzisa iMifanekiso yePhepha yeMali
Yiyiphi i-Master Boot Record (MBR)?
Indlela yokuthumela ugaxekile kwiFayili yeWebhu kwi-Yahoo Mail
Iyini ifayile ye-EXO?
Vimba iiHowaters Vs. Starters Remote
Ukudala i-akhawunti ye-akhawunti ye-SQL Server 2008
Fumana izaziso Xa imiyalezo yakho ifundwa kwi-OS X Mail
Iingcebiso zokufumana uMthombo wokuXhawula iProjekthi yakho yoPhuhliso lweNkqubo
Indlela yokusebenzisa i-Shake ukuShuqa kwi-iPhone kunye ne-iPod
Indlela yokufumana i-Wi-Fi kwi-Car yakho